Ny anaran-tanàna malagasy dia mahadika ny tiany ambara hatrany.
Henoko ny Filoha omaly nilaza hoe asiana pipeline na fantsona lehibe mitarika rano avy any Farahantsana, hamatsy rano an'Antananarivo, fa tsy maka amin'ny renirano izay tsy maharaka intsony.
Tsy manome tsiny anao aho, satria mety izay no noresahin'ny tekinisianina anao.
Fa ny ranobe mandifotra an'Antananarivo, dia tsy avy amin'ireo rano kely avy eny ambonin'ny vohitra Manjakamiadana fotsiny, fa ranobe avy any ambonin'ny faritra Mantasoa, Tsiazompaniry, eny na ny avy any atsimon'ny Toamasina, manaraka ny reniranon'ny Ikopa sy ireo vohitra na bassin versant no ilazana azy.
Mivarina mandeha any Farahantsana avokoa ireo rano ireo, miaraka amin'ny Ikopa sy Sisaony, ary mandeha miakandrefana mihazo an'ny Betsiboka, ary mivarina an-dranomasina any Mahajanga, rehefa namakivaky an'ny Maevatanana.
Ka raha hitarika rano ho an'Antananarivo, dia tsy ny rano any ambany Farahantsana (Altitude 1250) no ho ampakarina amin'ny paompy aty ambony Antananarivo, fa ny avy any Tsiazompaniry (Altitude 1500) no ampidinina, tsy mila paompy.
Nahafinaritra ahy ihany koa ny naheno omaly fa hitarina any Imerintsiatosika sy Arivonomamy ny Tanamasoandro.
Efa ela no nolazaiko an'io fa any no tena mety ny nouvelle ville, ary kely kokoa ny olana ara-tsosialy, satria telo avo heny ny habean'Antananarivo renivohitra ny any, ary azo anaovana aéroport international goavana ny ao Arivonimamo, sady hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra ihany koa.
Asiana autoroute mampitohy an'io nouvelle ville io mandeha aty Antananarivo, lalana tsy misy 30km vita latsaky 30min autoroute, na mandeha any Ambanidia Analakely aza mbola ela.
Azo atao izany ny manao tatatra béton moderina miainga avy any Tsiazompaniry, mitarika rano, mirefy 110km, sady azo andehanan'ny sambo madinika, ho fitaterana olona sy entana, no hitondra rano hamatsy an'Antananarivo, sy ny nouvelle ville Tanamasoandro, no hamatsy rano ihany koa ny nouvelle ville Imerintsiatosika Arivonimamo, ary hiafara any Farahantsana, ka ampiodina turbine hamatsy herinaratra aty amin'ny nouvelle ville.
Ny fambolena rehetra manamorona ny lakan-drano dia hidadasika.
Tsy maintsy jerena izany ny fotodrafitrasa ao Tsiazompaniry sy Mantasoa.
Ny tatatra fanariana rano, ny assainissement, ny gestion eau usée ary ny fako eto Antananarivo no mahadobo rano eto, satria ny rano ela vao tafavoaka, ny avy any ambony betsaka (rano 3500mm ny précipitation faritra atsinanana, izany hoe mahatratra 3 500litres/m² ny rano mandritra ny heritaona, raha angonina izany dia 3.5m ny haavon'ny rano amin'ny toerana iray raha tsy mahita lalana ivoahana io rano io. Mbola miampy ny précipitation, na orana eto Antananarivo 1500mm.
Ka tsy mahagaga raha rano 5m ny haavony raha miandrona no tsy ho dobo Antananarivo, tsy resaka rive gauche na rive droite fotsiny izany io.
Mila fanavaozana goavana ny fotodrafitrasa eto Antananarivo, mila avaozina avokoa ny réseau d'assainissement, ny fanariana ny tay sy ny maloto rehetra, satria dia isika ihany no mampihinana maloto antsika, satria ireny loto sy diky mivalana etsy sy eroa ireny dia miditra ambanin'ny tany, ary dia miafara ao anaty rano fisotrotsika avokoa, ka dia mihinana sy misotro ny malotontsika ihany isika.